IČO बारेमा: कसले टोकन बिक्री समयमा सबैभन्दा धन संकलन - Blockchain समाचार
IČO बारेमा: कसले टोकन बिक्री समयमा सबैभन्दा धन संकलन
बितेको वर्षमा, IČO धन हुर्काउन सबैभन्दा लोकप्रिय तरिका थियो. तर विशेषज्ञहरु दर्शाउन हामी टोकन बिक्री सञ्चालन गर्न एक पूर्ण अलग दृष्टिकोण देख्ने 2018. अब IČO-कहिलेकाहीं समयमा सबैभन्दा धन संकलन परियोजनाहरु जो सम्झन गरौं, केही सेकेन्डमा.
EOS – Decentralized आवेदन लागि सबैभन्दा शक्तिशाली पूर्वाधार
धेरै $700 लाख संकलन. IČO अझै मा रहेको छ
EOS decentralized अनुप्रयोगहरूको विकासकर्ताहरूको लागि एक decentralized मञ्च हो. EOS को निर्माता दान Larimer छ. उहाँले पनि BitShares को संस्थापक रूपमा जानिन्छ, Steem, र BitUSD.
यो विकासकर्ताले जुन सम्म सहयोग संकलन सञ्चालन गर्न फैसला गरेको छ कि विचारणीय छ 2, 2018. यो यस्तो परियोजनाका लागि एक धेरै अवधि छ. अक्टोबर को अन्त मा, सुरूवात स्केल मा 2017 सम्मेलन बिज्जू पियर्स EOS गरेको IČO लगभग आकर्षित थिए यसो $700 लाख मा 345 दिन, र यो सीमा थियो. पियर्स अनुसार, यो IČO भन्दा बढी भेला हुनेछ $1 अरब यसलाई अघि समाप्त.
प्लेटफर्म विकासकर्ताहरूको लागि सञ्चालन प्रणाली को ढाँचामा blockchain मा संचालित छ. प्राथमिक लक्ष्य जानकारी प्रविधिहरू को दक्षता सुधार छ (त्यहाँ पूर्णता कुनै सीमा छ, र यस्तो प्रणाली को क्षमताहरु मात्र मानव चेतना द्वारा सीमित छन्) र समानान्तर गणना र डाटा प्रोसेसिंग मार्फत प्रति सेकेन्ड लाखौं लेनदेनको लाखौं प्रयोगकर्ताहरूको संख्या र गति वृद्धि गरी blockchain scalability को समस्या समाधान गर्न. यी विचारहरू प्रभावशाली छन्. नेटवर्क कामकाज DPoS पुष्टि हुनेछ (शूलीमा को प्रत्यायोजित प्रमाण). छ, यो कारोबार भएको blockchain देखा पर्न लागि आफ्नो वालेटमा केही सिक्का सबै समय राख्न आवश्यक छ. एक ठोस आंकडा अहिले प्रदान गर्न सकिन्छ, तर POS खानी सिद्धान्त विश्लेषण भएको, यो थप सिक्का आफ्नो निपटान मा हो कि स्पष्ट हुन्छ, अधिक संभावना तपाईं एक ब्लक फेला पार्न छ. यो विधि साथै सामाजिक सञ्जाल मा साबित छ Steemit, जहाँ कारोबार पुष्टि गर्न औसत समय सेकेन्ड को एक जोडी छ.
FileCoin – डाटा भण्डारण लागि Decentralized बजार
$257 लाख संकलन
FileCoin डाटा भण्डारण र प्रशोधनका लागि यसको आफ्नै blockchain मा एक decentralized नेटवर्क छ. नेटवर्क सञ्चालनका सिद्धान्त खानी तुलना गर्न सकिन्छ; मात्र फरक खानी लागि मञ्च हो. प्रयोगकर्ता FileCoins लागि विनिमय आफ्नो भण्डारण पहुँच प्रदान.
त्यहाँ नेटवर्क प्रयोग गरेर दुई तरिकाहरू छन्:
ग्राहकहरु क्लाउड भण्डारण खरीद वा नेटवर्क मा Miners देखि आवश्यक जानकारी अनुरोध र FileCoins सेवाहरू भुक्तान.
Miners FileCoins लागि आफ्नो भण्डारण पहुँच प्रयोगकर्ता प्रदान.
FileCoin यस्तो Storj र SIA रूपमा प्रतियोगिहरु छ. पहिलो परियोजना Ethereum आधारित र scalability समस्या छ छ, र दोस्रो साथै एकदम सुस्त छ. FileCoin प्रयोगकर्ता र आफ्नो डाटा अन्तरक्रिया गर्न यसको आफ्नै नेटवर्क र प्रोटोकल प्रयोग गर्दछ.
Tezos – एक नयाँ डिजिटल राष्ट्रमंडल
$232 लाख संकलन
Tezos साँचो डिजिटल समुदाय सिर्जना गर्ने एक नयाँ decentralized आत्म-व्यवस्थित blockchain सिस्टम छ. प्रविधिलाई औपचारिक प्रमाणिकरण सुविधा, जो गणितीय सञ्चालनहरू नियामक कोड को विशुद्धता प्रमाणित गर्छ र सबैभन्दा नाजुक वा आर्थिक भार स्मार्ट अनुबंध सुरक्षा बढ्छ.
अर्को शब्दमा, विकासकर्तालाई Ethereum र नयाँ प्रोटोकल को रिलीज घोषणा गर्न वैकल्पिक परिचय सुरक्षित स्मार्ट अनुबंध काम मा विशेष. प्रणाली मौलिक कार्यहरू पूरा उद्देश्य छ, यस्तो पारदर्शिता रूपमा, सुरक्षा, र कामको गति. स्मार्ट अनुबंध लागि आफ्नै भाषा, Michelson भनिन्छ, यस उड्डयन उद्योग मा प्रयोग गरिन्छ कि सिद्धान्त अन्तर्गत एक औपचारिक प्रमाणिकरण प्रणाली प्रदान गर्दछ.
यस्तो सफल IČO बावजुद, परियोजना कारण केही आन्तरिक विवादका यसको विकास धेरै सुरुमा अझै पनि छ. कम्पनी को संस्थापक स्विस कोष को अध्यक्ष संग लडाई छानिएन छ, जो कोष सङ्कलन प्रदान, र लगानीकर्ताले अझै पनि आफ्नो टोकन पर्खिरहेका छन्. सबैभन्दा अधीर व्यक्तिहरूलाई पहिले नै परियोजना विरुद्ध धेरै मुद्दा दायर गरेका छन्, जबकि.
Bancor – Decentralized लिक्विडिटी नेटवर्क
$150 लाख संकलन
Bancor भनेर Ethereum टोकन भण्डारण गर्न र सजिलै एक सरल वेब वालेट प्रयोग गरेर एक स्वचालित गणना मूल्य मा तेस्रो दल बिना कुनै पनि अन्य टोकन तिनीहरूलाई रूपान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ एक decentralized नेटवर्क छ.
परियोजना को आधार स्मार्ट अनुबंध र cryptocurrency आदानप्रदान बाइपास टोकन आदानप्रदान कि Ethereum नेटवर्क को एक सुधार प्रोटोटाइप छ. यो छिटो छ, विश्वसनीय, र, के सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ, सुरक्षित. लेनदेन स्मार्ट अनुबंध को मद्दतले गरिन्छ. “जादू गणित र किन्छ र बजार मा स्थिर लिक्विडिटी को मात्रा र विनिमय सूचीकरण बिना कायम छ यस्तो तरिकामा बेच्छ एउटा सरल सूत्र मा निहित,” विकासकर्तालाई व्याख्या.
कम्पनी को उपलब्धिहरू बढी छन् 50 टोकन परियोजनाहरू, पावर लेजर सहित, मोम टोकन, SENSE, र अरूलाई. तिनीहरूले पहिले नै नेटवर्क Bancor सामेल भएका छन्. नौ साझेदार परियोजनाहरू पहिले नै आफ्नो टोकन सक्रिय छन् र किन्न र Bancor आवेदन मार्फत तिनीहरूलाई बेच्न सक्नुहुन्छ. BNT बाहेक (Bancor नेटवर्क टोकन), आवेदन Eth समर्थन, GNO, ENJ, बीएमसी, इंडस्ट्रीज, STX, इच्छा, र IQT. स्मार्ट अनुबंध को मद्दतले, नेटवर्क परिवर्तित 20.7 लाख BNT ($58 लाख Bancor औसत दरमा).
स्थिति – को Ethereum मोबाइल ओएस
$100 लाख संकलन
यो decentralized आवेदन को पूर्णतया नयाँ वातावरण हो (DApps), जो सिस्टम अन्तरक्रिया लागि साथै मंच को अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग एक सुविधाजनक इन्टरफेस संग प्रयोगकर्ता प्रदान. यसबाहेक, प्रणाली स्वतन्त्र वालेट को कार्य पूरा गर्न सक्नुहुन्छ, ब्राउजर, र च्याट. सारा प्रक्रिया decentralized छ र, त्यसैले, सुरक्षित र छिटो.
यो विकासकर्ताले परियोजना विकास मा समुदाय मा सट्टेबाजी छन् रोचक छ. छ, विकासकर्तालाई को IČO सिद्धान्त यस्तो अधिकार को अभाव implies भन्ने तथ्यलाई बावजुद विकास परियोजनाको लागि निर्णय बनाउने भाग लिन आफ्नो समुदायमा टोकन मालिक मौका दिन.
धेरै decentralized आवेदन पहिले नै स्थिति मा दर्ता गरिएको छ, Gnosis र ऐरागोन सहित.
Gnosis (250,000 Eth संकलित) भविष्यवाणी लागि decentralized मञ्च हो. उदाहरण को रुपमा, भविष्यवाणी प्रसिद्ध मान्छे छलफल उद्देश्य गर्न सकिन्छ, journalistic छलफलहरू, कला काम पूर्व-लिलामी कुनै वस्तुको मूल्य, खेल सट्टेबाजी, आदि.
TenX – रूपान्तरण र भर्चुअल मुद्राहरू खर्च. कुनै पनि समयमा. कहीं
$83,1 लाख संकलन
को सिंगापुर भुक्तानी कम्पनीको रूपमा फिएट मुद्राहरू प्रयोग रूपमा सुविधाजनक र सजिलो cryptocurrencies प्रयोग गर्न प्रयासरत. त्यसैले, तिनीहरूले भिषा र मास्टर कार्ड बाट अनुमोदन प्राप्त र आफ्नो प्लास्टिक कार्ड जारी. कार्ड issuing को लागत छ $15, तर तपाईं साथै आधिकारिक वेबसाइट यसको भर्चुअल संस्करण आदेश गर्न सक्छ. कम्पनी सेवा प्रयोग कम आयोग शुल्क प्रतिज्ञा कार्ड मा खर्च भन्दा कम छन् भने $1,000 प्रति वर्ष. यदि कार्ड मा खर्च यस स्तर नाघ्यो, आयोग शुल्क चार्ज गरिने छैन.
आजकल, प्रणाली Bitcoin काम गर्छ, जबकि ईथर र ड्यास बन्द बिटा मोडमा छन्. ERC20 मानक टोकन को समर्थन पनि यसो छ, जो DGX संग अनुकूलता अर्थ, गणराज्य, ट्रस्ट, नव, र अरूलाई. के सबै भन्दा रोचक छ तपाईं भिषा र मास्टर कार्ड स्वीकार गर्ने कुनै पनि भण्डारमा एक TenX कार्ड भुक्तानी गर्न सक्ने छ. यो Vitalik Buterin द्वारा समर्थित एक धेरै नै होनहार परियोजना हो.
नागरिक – सुरक्षित पहिचान पारिस्थितिकी तंत्र
$33 लाख संकलन
नागरिक माग आवश्यक जानकारी पहुँच प्रदान गर्दछ सार्वभौमिक वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ. अर्थात्, यो blockchain मार्फत पहिचान प्रमाणिकरण सेवामा पहुँच प्रदान. यसरी, नागरिक प्रयोगकर्ताहरूको व्यक्तिगत डाटा सरल र सुरक्षित पहुँच प्रदान गर्न र आफ्नो पहिचान प्रमाणित हुनेछ.
उदाहरणका लागि, कम्पनी कार तान्ने भाग लिन सुदूर पूर्व वसोवास प्रदान गर्दछ, जो केवल तिनीहरूलाई लागि आयोजित गरिनेछ. को प्रमोटर नागरिक संग cooperates भने, सबै सहभागीहरू देश को यो भाग को बासिन्दा हुन् कि तिनीहरूले जाँच गर्न सक्नुहुन्छ.
नागरिक पहिले नै यसको डिजिटल पहिचान मंच को लागि एक आवेदन जारी गरेको छ, नागरिक सुरक्षित पहिचान प्लेटफर्म रूपमा ज्ञात (iOS संस्करण मात्र).
Aventus – B2B Ticketing पूर्वाधार
$18.7 लाख संकलन
Aventus सुरक्षित र पारदर्शी तरिकाले विभिन्न घटनाहरू लागि टिकट सिर्जना गर्न र प्रवर्द्धन गर्न एक उपकरण छ. आफूलाई नियन्त्रण छैन टिकट वितरण घटनाको आयोजकहरु.
परियोजना दोस्रो बजारमा टिकट वितरण सिद्धान्त पुनर्विचार गर्न साथै unregulated विज्ञापन र अवैध क्रियाकलाप टिकट को बिक्री गर्न सम्बन्धित निर्मूल गर्न अनुमति दिन्छ. यस्तो उपकरण संग, आयोजकहरु टिकट लागि न्यूनतम र अधिकतम मूल्य सेट र माध्यमिक बजार मा आफ्नो आन्दोलन निगरानी गर्न सक्षम हुनेछ, सारा प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने.
अर्को शब्दमा, यो एक सुरक्षित Ticketing सिस्टम छ. Aventus को प्राथमिक कार्य टिकट वितरण को अवधारणा परिवर्तन र यो decentralized बनाउन छ, प्रमोटरों र विशेष प्रणाली स्वचालित रूपमा घटनाहरू लागि टिकट बेच्न र यसको लागि आयोग प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ जो.
अब हामी धेरै सफल रूसी IČO परियोजनाहरूमा विशेष ध्यान हुनेछ.
MobileGo – दोस्रो गेमिङ क्रान्ति आउँदैछ छ
$53 लाख संकलन
ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पहुँच खेल को दुनिया परिवर्तन भएको छ. एकल अभियान बोरिंग छन्, र खेलाडीहरू वास्तविक समयमा प्रत्येक अन्य संग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनुहुन्छ. blockchain को प्रविधि बहु गेमिङ मा एउटा क्रान्तिमा गर्नेछ: अब cybersport प्रतियोगिताहरु सबैलाई उपलब्ध हुनेछ. यो पहिले नै स्मार्ट टोकन उपलब्ध छ MobileGo, विश्वभरिबाट खेलाडीहरू लाखौं decentralized टूर्नामेंट र P2P मेल खाने एकताबद्ध गर्न अनुमति दिन्छ जो.
यो सिधा राख्न, विकासकर्तालाई ई-खेल घटनाहरूको सीमाहरु विस्तार गर्न चाहनुहुन्छ, सबै खेलाडी बराबर सर्तहरू मा प्रतियोगिताहरु मा भाग लिन अनुमति दिन्छ जो. खेलाडीहरू नगद पुरस्कार संग केहि उपलब्धिहरू लागि पुरस्कृत गरिनेछ.
रूसी खनन केन्द्र – Multicellular खनन
$43 लाख संकलन
रूसी पकड कम्पनी रूस मा खानी केन्द्र शुरूआत, अद्वितीय र सबै भन्दा उन्नत Miners विकास, Multiclet भनिन्छ, र सूर्योदय Miners उत्पादन.
यो परियोजनाको मुख्य सफलता विचार एक cryptocurrency मेरो हुनेछ कि "ASIC-प्रतिरोधी" खान सिर्जना गर्न छ, उदाहरणका लागि, Ethereum, धेरै पटक थप कुशलतापूर्वक भन्दा ग्राफिक्स कार्ड र ऊर्जा को एक न्यूनतम रकम प्रयोग. यस्तो संकेतक एक multicellular प्रोसेसर को विकास मार्फत हासिल गर्न योजना छन्, जो एक ग्राफिक्स कार्ड चिप को वितरण कम्प्युटिङको समान सिद्धान्त आधारित हुनेछ.
आजकल, कम्पनी विदेशी Bitfury चिप्स संग सूर्योदय ASICs आपूर्ति. घरेलू गणनाको प्रोसेसर को विकास लगभग एक वर्ष हुनेछ. परियोजना खानी मा रूसी क्रान्तिको मान्न सकिन्छ.
INS पारिस्थितिकी तंत्र – यो किराना उद्योग, reinvented
$42.1 लाख संकलन
यो सुरुवातमा खाना सीधा उत्पादकहरु र उपभोक्ताहरु जडान पहिलो वैश्विक decentralized वातावरण हो.
उद्देश्य खरीदारों सीधा निर्माता अन्तरक्रिया गर्न सक्ने छ, बाइपास रिटेलर र अन्य मध्यस्थ पूर्णतया नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि. रिटेलर सामान्यतया आफ्नो बजार शक्ति overuse: तिनीहरूले मूल्यहरु overcharge र साना व्यापारीहरु दबाउन. यो INS पारिस्थितिकी तंत्र संग हल गर्न सकिन्छ कि एक साधारण समस्या छ.
SONM – विश्वव्यापी कुहिरो सुपर
$42 लाख संकलन
परियोजना कुहिरो गणनाको लागि एक decentralized वैश्विक सुपर कम्प्युटर एक अवधारणा प्रतिनिधित्व. को Ethereum मंच मा decentralized अपरेटिङ सिस्टम गणनाको कार्य र क्षमता को कार्यान्वयन लागि जिम्मेवार छ. यो सिस्टम सफ्टवेयर को एक विशेष टुक्रा एकल कम्प्युटर नेटवर्कमा हजारौं वा संसारभरि कम्प्युटर को पनि लाखौं एकीकृत गर्न सक्ने छ. यो सम्भव गणन र जटिलता कुनै पनि प्रकारको रेकर्ड-तोडने परिणाम हासिल गर्न गर्नेछ, यसलाई चिकित्सा डीएनए टुक्रा मा अणु संख्या गणना छ कि छैन, वा टाढा ठाउँ अनुसन्धान, वा धरती र अन्य ग्रह मा जीवन को नयाँ प्रजाति लागि देख.
टोकन बिक्री समयमा सबैभन्दा धन
Blockchain समाचार 16.06.2018
Cryptocurrency नयाँ मंच ...
Break To $3,600 वा $5,400? | R...
कोइनबेस, Litecoin, Tomochain,...
BItcoin / Cryptocurrency समाचार ...
अघिल्लो पोस्ट:को IČO बजारमा कसरी परिवर्तन हुनेछ 2018?
अर्को पोस्ट:Blockchain समाचार 8 जनवरी 2018
THE BREAKOUT CAME!! | $7,184 Target Due To Futures Gap?? | क्रेग राइट “Confirmed As Satoshi”
Top Cryptocurrency by Weiss Ratings, More Crypto.com Updates, EOS, BITCOIN in Japan – गुप्त समाचार